चलचित्र – Page 162 – Medianp
भदौ २२ मा प्रदीप खड्का र पूजा शर्माबीच भिडन्त, ‘रोजी’, ‘रामकहानी’ र ‘सुश्री सम्पत्ति’ रिलिज हुने
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असार ३१, २०७५१२:५२0
काठमाडौं, ३१ असार । भदौ र असोज महिनामा रिलिज भएका चलचित्रमध्ये अपवादबाहेक सबै हिट भएका छन् । यो दुई महिना नेपालीहरूको चाडपर्वको महिना भएकाले पनि सिनेमाघरमा दर्शक खाली हुँदैनन् । नेपाली सिने क्षेत्रका लागि २०७५ साल
आमिर खान अब अध्यात्मिक गुरु ओशो बन्ने
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असार ३१, २०७५१२:०२0
एजेन्सी,३१ असार । मिस्टर परफेक्सनिस्ट अभिनेता आमिर खान हालै संसारकै सबैभन्दा विवादित अध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीशको बायोफिकको मा ओशोको भूमिकामा देखिने भएका छन् । उनी आफ्नो फिल्म ‘ठग्स अफ हिनदुस्तान’ को सुटिङ सके लगत्तै अभिनेता आमिर
चन्द्रागिरिमा रोमियो र मुनाको खासखुस , के कुरा गर्दै थिए ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असार ३१, २०७५११:४१0
काठमाडौँ , चलचित्र 'रोमियो & मुना' रिलिजको लागि तयार छ । केहि हप्ता अघि रिलिज भएको फिल्मको ट्रेलरले दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । फिल्ममा एक गाउँले युवती त मोडर्न केटाबीचको प्रेम देखाईएको ट्रेलरबाट अनुमान
किन कम भए एकै झट्कामा अमिताभ, शाहरुख र सलमानको लाखौँ फलोअर्स ?
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असार ३१, २०७५११:२६0
एजेन्सी,३१ असार । बलिउडका सुपरस्टार कलाकारहरुको फलोअर्स संख्यामा अचानक कमी आएको छ । यद्यपी उनीहरुको स्टारडमको कारण ट्वीटर र इन्स्टाग्राममा फलोअर्सको संख्यामा कमी आएको हुन सक्ने पाइएको छ । जानकारीका अनुसार अमिताभ बच्चनको ट्वीटरमा ४ लाख
प्रियंका र आयुष्मानले गरे इन्गेजमेन्ट !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, असार ३०, २०७५२१:०९0
काठमाडौँ ३० असार । चर्चित अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराजको इन्गेजमेन्ट भएको छन् ।झण्डै डेढ बर्ष प्रेममा रहेका यी दुईले इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । शनिबार यी दुईको टिकाटालो भएको हो । आयुष्मानकी आमा रविना देशराजले आफ्नो इन्टाग्राममा केहि
फोटो पोज दिने क्रममा कटरीनालाई सार्कले आक्रमण गरेपछि…
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, असार ३०, २०७५१८:४१0
एजेन्सी, मानिसहरु अक्सर आफ्नो बिभिन्न पोजका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न निकै ललाइत हुने गर्दछन । अझ सेलिब्रेटीहरु आफ्ना हरेक जस्ता गतिबिधिलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने गर्दछन । सेलिब्रेटीहरुले हाल्ने यस्ता तस्बिरका कारणले पनि फ्यानहरुले उनका गतिबिधिलाइ पच्छ्याउने गर्दछन । भारतकी एक चर्चित मोडल कटरीनाले अस्ट्रेलियामा छुट्टि
अशोकको परिक्षाबारे सोध्दा झर्किए टंक, भन्छन ‘नर्सरीको एक्जाम दिदैन, ल के हुन्छ ?’
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, असार ३०, २०७५१७:४५0
काठमाडौं । पछिल्लो समय युट्युवमा निक्कै भाईरल भएका अशोक दर्जीका फ्यानहरु निक्कै छन् । उनको गीत मन पराएपछि यतिवेला उनको क्रेज ह्वात्तै बढेको पनि छ । जसको कारण असोकका शुभेच्छुकहरु उनको बारेमा केहि भईरहेको चिन्ता ब्यक्त
के डेजाभुमा पुनम पाण्डे ‘टपलेस’ होलिन् ? (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, असार ३०, २०७५१२:५६0
काठमाडौं, ३० असार । डेजाभु क्लब दरबार मार्ग काठमाडौंमा भारतीय चर्चित मोडल तथा बलिउड नायिका पुनम पाण्डेले धमाका मच्चाउने भएकी छन् । रशियामा जारी विश्वकप फुटबलको अवसरमा यहाँ आएकी मोडल पाण्डेले आफ्ना फ्यानहरुसँग काठमाडौंको दरबारमार्गमा
Previous 1 … 161 162 163 … 395 Next